राजनीति « Nagarik Khabar
कांग्रेस १४औं महाधिवेशनः वडा वडासम्मै धाँजा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा गुटको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर उनको साढे पाँच वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसमा गुट–उपगुटको परम्परा झनै झांगिएको छ। त्यसको
ओलीविरुद्ध चुनावसम्म मोर्चाबन्दी गर्ने नेपालको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आउँदो निर्वाचनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्न प्रस्ताव गरेको छ। मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेको मोर्चाबन्दी कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको पूर्णकाल
आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार, डा. खड्का परराष्ट्र मन्त्री
काठमाडौं । आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाली काग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेसंगै आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने
एकीकृत समाजवादीप्रति गोकुल बास्कोटाको कटाक्ष
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नामलाई लिएर ब्यंग्यात्मक कटाक्ष गरेका छन । नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर बनेको एकीकृत समाजवादी प्रति बास्कोटाले गरेको ब्यंग्यात्मक कटाक्ष पार्टीको
कोराेनाका कारण स्थगित माउन्टेन फ्लाइट पुनः सुरु
काठमाडाैं । कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित भएको मुलुकको पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) पुनः सुरु भएको छ । कोभिडको जोखिम कम भएसँगै वायुसेवा कम्पनीले पर्वतीय उडान सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सर्वोच्च
माओवादी अब नयाँ शिराबाट अघि बढ्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
कास्की। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्म समीक्षासहित रूपान्तरित भएर पार्टीलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाइने बताएका छन् । पार्टीको गण्डकी प्रदेश कमिटीले आज साँझ आयोजना गरेको
माधव नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन: एकीकृत समाजवादीकाे प्रमुख दुश्मन एमाले (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । मंगलबार शुरु भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीकाे केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस भएकाे १३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रमुख दुश्मन किटान गरेको छ
भरतपुर महानगरमा माओवादी नेता–कार्यकर्ताले गरे छलाङमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता
चितवन । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) भरतपुर महानगर कमिटीकोे विस्तारित बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चितवन जिल्ला इन्चार्ज ईश्वरी भट्टराईले माओवादी पार्टीलाई शसक्त र जनप्रिय
डा. खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने बाहेक गठबन्धनमा सहमति जुटेन
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री नेपाली काँग्रेसका नेता डा नारायण खड्कालाई बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा मिलाउन मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा
१३ वटा जिल्लामा अझै मिलेन कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार विभिन्न सात जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको छ । काठमाडौँसहित काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, कपिलवस्तु, बर्दिया, बाजुरा र मोरङमा वडा अधिवेशन भएको हो । बाँकी १३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा गुटको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
बाजुराबासीको पीडाः दशैं आयो, चामल आएन
बाजुरा । जुनकला बुढा चामल किन्न तीन दिन लगाएर कवाडी डिपोमा पुगिन्। तर, चामल नपाएपछि
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आउँदो निर्वाचनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
गुल्मी पहिरोः एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीको मृत्यु
गुल्मी । गुल्मीमा गएराति अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोमा पुरिएर एकै घरका तीन जनाको ज्यान गएको
काठमाडौं । आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुको मंगलबार बसेको बैठकले
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नामलाई लिएर ब्यंग्यात्मक कटाक्ष